Shanta dal ee ugu caafimaadka wanaagsan Adduunka - BBC News Somali
Shanta dal ee ugu caafimaadka wanaagsan Adduunka
21 Abriil 2020
Xigashada Sawirka, Jack Guez/Getty Images
Dalalka ugu caafimaadka wanaagsan Adduunka ayaa lagu kala ogaanayaa sida ay ula dagaallamayaan cudurka safmarka ah ee Covid-19 iyo guulaha ay ka gaarayaan.
Waxaan la hadalnay dhakhaatiir iyo dad rayid ah oo daggan dalalka ugu sarreeya heerka adeegga caafimaadka, si aan u fahanno qaabka ay u maareynayaan fayraska ku faafaya dunida iyo caqabadaha wali horyaalla shacabka.
Dagaalka ka dhanka ah Covid-19 wuxuu ka socdaa xarumaha caafimaadka iyo isbitaallada guud ahaan caalamka. Laakiin guusha laga soo hoyinayo dagaalkaas waxaa door weyn ka ciyaaraya dal walba heerka uu ka gaarsiisan yahay awoodda hannaanka caafimaadka.
Ilaa hadda waxaa jira farqi la dareemi karo oo u dhaxeeya dalalka iyo sida ay ugu kala awood badan yihiin la tacaalista fayraskan iyo booskii ay horay uga jireen liiska waddamada ugu caafimaadka wanaagsan.
Warbixintan waxaan diiradda ku saareynaa liiskii ugu dambeeyay ee lasoo saaray sanadkii 2019-kii, kaasoo lagu qeexayay heerka adeegyada caafimaad ee 167 waddan.
Xigashada Sawirka, Mlenny/Getty Images
Dalka Japan waxay dadka intooda badan xiran yihiin gafuur-xirka loogu talagalay in la isaga ilaaliyo hawada uu xanuunka ku jiro
Japan wuxuu kaalinta labaad uga jiraa liiska dalalka ugu caafimaadka wanaagsan ee lagu dhawaaqay sanadkii lasoo dhaafay. Laakiin waddankan ayaa caalamka oo dhan looga ammaanay sida uu guul weyn uga gaaray maareynta cudurka Covid-19, inkastoo sare u kac cusub oo kiisaska xanuunkan ah ay dalka dib ugu celiyeen heerkii qeyladhaaminta.
Mowjadda coronavirus ee kusoo labakacleysay Japan ayaa horseedday in Ra'iisul Wasaare Shinzo Abe uu 7-dii bishan April waddanka galiyo xaalad deg deg ah.
Balse iyadoo ay taasi jirto, dalkan wali ma uusan ku dhawaaqin xayiraadda dhaqdhaqaaqyada, tanina waxay caddeyneysaa in awoodda adeegyada caafimaad ee Japan ay tahay mid aad u weyn. Fayraska ayaa lagu xakameeyaa marxaladaha ugu horreeya.
'Qalabka neefta siinaya ayaan ka damiyaa si aan ula qaato waqtiga ugu dambeeya noloshooda'
Dadka ka caafimaaday Coronavirus oo dhiiggooda la isticmaali doono
Xitaa haddii dadka shacabka ah aysan heli karin adeegyada baaritaanka cudurka(oo ah kuwo loo sameeyo dadka ay calaamadaha ka muuqdaan oo kaliya) waxay tagi karaan xarumaha caafimaad ee deegaannadooda ku yaalla, halkaasoo baaritaanno casri ah loogu sameeyo.
"Qof bukaan ah oo aysan wax calaanado ah ka muuqanin ayaa baaritaan buuxa oo raajo ka mid tahay la marsiiyaa, waxaana laga daweeyaa xanuunnada ka dhasha cimilada qabow", ayuu yiri Dr Mika Washio, oo ah dhakhtar uu fadhigiisu yahay magaalada Tokyo.
Xigashada Sawirka, NurPhoto/Getty Images
Magaalada Daegu ee dalka Kuuriyada Koonfureed waxay saldhig u ahayd cudurka Covid-19 ee dalkaas gaaray
Dalka Kuuriyada Koonfureed oo kaalinta afaraad uga jira liiska waddamada ugu caafimaadka fiican caalamka wuxuu si gaar ah ugu diyaarsanaa inuu wajaho la dagaallanka Covid-19. Waddankan ayaa khibrad hore heystay maadaama uu la tacaalay cudurkii 2015-kii ka dillaacay Bariga Dhexe ee neef-qabatoonka lahaa, kaasoo lagu magacaabay (Mers).
Xarumaha adeegga caafimaad bixiya iyo isbitaallada waaweyn ayaa goor horeba usii qalabeysnaa, tababarna u heystay inay maareeyaan xaalad kasta oo noocaas ah.
Waddankan ayaa awood u yeeshay inuu maalin kasta baaritaan ku sameeyo dad gaaraya 450,000 oo qof, tiradaasna waxay xoogaa ka yartahay 1% ka mid ah tirada shacabkiisa guud oo ah 51 milyan.
Tirada dadka cusub ee uu maalmihii ugu dambeeyay cudurka kula dhacayay dalkaas waxay u dhaxeeyeen 47 ilaa 53 ruux.
Xigashada Sawirka, Menahem Kahana/Getty Images
Bulshada mad-habta orthodox-ka ee Israa'iil ayaa ahaa kuwa uu saameynta ugu badan ku yeeshay coronavirus, marka loo eego bulshooyinka kale reer Israa'iil
Marka la eegayo habkii loola socday ama looga falcelinayay cudurka Covid-19 ee markii ugu horreysay ka dilaaccay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, dalal aad u kooban ayaa ka horreeyay ama ka dadaal badnaa Israa'iil, taasoo micnaheedu yahay in Israa'iil ay si weyn ugu toog heysay saameynta uga imaan karta fayraskaas faafayay.
Israa'iil waxay kaalinta 11-aad uga jirtaa dalalka ugu sarreeya dhinaca adeegyada caafimaadka ee adduunka.
Markii lasoo gaaray dabayaaqadii bishii January ee sanadkan 2020-ka, wasiirka caafimaadka ee Israa'iil wuxuu horayba usii saxiixay isbaddal lagu ballaarinayay awoodda adeegyada caafimaad ee loogu talagalay dadweynaha, kaasoo looga dan lahaa in tabar dheeraad ah loo helo la dagaallanka fayraskaas dillaacay.
Waxaa durbadiiba la qaaday tallaabooyin kale oo ay ku jiraan in la joojiyay duullimaadyada aan muhiimka ahayn ee dibadda iyo in 14 maalmood la karantiilo muwaadiniinta kasoo laabadatay meelaha uu cudurka saameynta weyn ku yeeshay.
Xigashada Sawirka, Alex Grimm/Getty Images
Jarmalka wuxuu hadda billaabayaa inuu khafiifiyo xayiraadaha, Iskuulladuna waxay si tartiib tartiib ah u furmayaan laga billaabo 4-ta bisha May
Jarmalka oo tirada dhimashada coronavirus aad uga yaraa inta badan dalalka reer Yurub ee dariska la ah, wuxuu kaalinta 12-aad uga jiraa waddamada ugu caafimaadka fiican caalamka.
Waxaa dalkan lagu tilmaamay mid guul weyn ka gaaray cudurka, wuxuuna tusaale u noqday guud ahaan caalamka.
Laakiin khubaradu waxay ka digayaan in waddankan uusan wali si buuxda uga nabad qabin dhibaatada cudurka.
Hase ahaatee baaritaanka baaxadda leh ee ay waaxda caafimaadka ee Jarmalka awoodda u yeelatay ayaa horseeday guusha lagu naalloonayo.
Tallaabooyinka uu Jarmalka ku hor istaagay faafitaanka cudurkan waxaa ka mid ah in dadka xanuunsan iyo kuwa ay calaamadaha ka muuqdaan aad looga fogeeyay bulshada caafimaadka qabta.
Xigashada Sawirka, RugliG/Getty Images
Xeebta Bondi waxay xirneyd tan iyo 21-kii March, kaddib markii dadka ay sameyn waayeen kala fogaansho
Australia, oo kaalinta 18-aad uga jirta dalalka ugu caafimaadka fiican ee lagu noolaado, waxay hadda si wacan u maareysay la dagaallanka coronavirus, waxaana u suurtagashay in kiisaska cusub lagu koobo wax ka yar 5%.
"Taasina waxay ahayd mid aad uga fiican sida la filayay", sida uu qabo Ra'iisul Wasaaraha dalkaas Scott Morrison oo khudbad jeediyay 7-dii bishan April.
Australia waxaa sidoo kale ku yaraa isu gudbinta cudurka ee dadka dhexdiisa ah, dowladduna waxay qaadday tallaabooyin si weyn loogula soconayay fiditaanka cusurka.
Waxaa si dhow loola socday dadka dibadda kasoo laabtay, oo la hubinayay inay karantiil galeen. Sidoo kale waxaa dadka cudurka qaba aad looga ilaalinayay inay xiriir la sameeyaan dad fiyow.
Tixraaca wararka Covid-19 ee Afrika
Maxaa ka jira in filimkan uu sii saadaaliyay caabuqa Corona?
Sida wararka beenta ee corona u faafaan
Wiil Soomaali ah oo laga helay cudurka coronavirus oo ka walwalsan Soomaalida kale ee aan isbaarayn
Maxay yihiin kumaandooska lagu tababarayo Turkiga ee uu Xasan Sheekh ugu hanjabay Al-Shabaab?
6 Luulyo 2022
Maxay ganacstada qaadka Kenya wadnaha farta ugu hayaan?